'ट्राफिक लाइट सुचारु गर्न गाह्रो'
अन्तर्वार्ता/विचार बुधबार, पुस १३, २०७३
काठमाडौंका सडकको 'ट्राफिक लाइट' को अवस्थाका बारेमा सडक विभागका उप–महानिर्देशक एवं प्रवक्ता दयाकान्त झा भन्छन्, “पुराना ट्राफिक लाइट मर्मत गर्न सम्भव छैन।”
काठमाडौंका सडकमा बिग्रिएका ट्राफिक लाइट मर्मत गर्ने जिम्मा कसको हो?
ट्राफिक लाइटको जडान सडक विभागले नै गरेको हो। लामो समय भयो, पुराना भए र केही बिग्रिए। सार्क सम्मेलनको बेला मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थियौं। तर, धेरै ठाउँमा सुचारु गर्न सकिएन।
समय–समयमा मर्मत सम्भारमा किन ध्यान दिइन्न?
जापान सरकारको सहयोगमा २०५१/५२ सालमा ट्राफिक लाइट राखेका हौं। मर्मतका लागि जापानी र चिनियाँ प्राविधिकहरू पनि ल्याएका थियौं। तर, ती धेरै पुराना भएकोले चल्न नसक्ने प्राविधिकहरुले बताएका थिए। मर्मत–सम्भारका सामान नेपालमा नपाइने भएकोले पनि कठिन भएको छ।
सूर्यविनायक–कोटेश्वर सडकखण्डका नयाँ ट्राफिक लाइटको हालत पनि त उस्तै छ!
सूर्यविनायक–कोटेश्वर सडक जापानका तर्फबाट नेपाललाई हस्तान्तरण भएको छैन। अहिले त्यहाँको जिम्मा जापानकै हो। त्यसैले त्यहाँको अवस्थाका विषयमा केही भन्न मिल्दैन।
योसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा पनि विभाग जिम्मेवार नभएको आरोप छ नि!
यो कुरा स्वाभाविक हो। हाम्रो बजेट, जनशक्ति आदि कारणले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकिएको छैन। अहिले ट्राफिक सम्बन्धी काम 'काठमाडौं दीगो शहरी यातायात आयोजना' ले हेरिरहेको छ। काठमाडौंका ३५ स्थानमा ट्राफिक संकेत राख्ने काम भइरहेको छ। छिट्टै परिणाम देखिनेछ।
ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ?
ट्राफिक सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्छ। त्यसलाई संक्षेपमा भन्न गाह्रो छ। मुख्यगरी अण्डर पास र फ्लाई ओभरको आवश्यकता देखिन्छ। त्यसका लागि पनि जग्गा पुग्दैन। सडक विस्तारका लागि नै पर्याप्त जग्गा नभइरहेको सन्दर्भमा फ्लाई ओभर र अण्डर पास कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलमै छौं।